UPDATE: Xildhibaannada BF Soomaaliya oo ku shiri doona qaab Online ah (Internetka) | HalQaran.com
Home Wararka Maanta UPDATE: Xildhibaannada BF Soomaaliya oo ku shiri doona qaab Online ah (Internetka)
UPDATE: Xildhibaannada BF Soomaaliya oo ku shiri doona qaab Online ah (Internetka)
Muqdisho (Halqaran.com) – Iyadoo gelinkii dambe ee Jimcihii shalay dib ugu soo laabteen dalka, Guddoomiyeyaasha labada Aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya oo muddooyinkii dambe ku xanibnaa dalka Turkiga ayaa sida qorshaha uu yahay kulamada Baarlamaanka waxaa la rajeynayaa in markale dib loo bilaabo.
Xildhibaan Maxamed Xasan Nuux oo ah Hab-dhowraha Baarlamaanka Federalka Somaliya oo la hadlay laanta Af Soomaaliga ee BBC-da, ayaa sheegay inay diyaariyeen qorshe dhanka Internet-ka oo kulamada Baarlamaanka ay ku dhici doonaan hadda kadib.
Mudane Maxamed Xasan Nuur ayaa xusay, in la diyaariyay nidaamka Zoom meeting oo ah hab waayahan dambe shirarka adduunka ay ku dhacaan.
Wuxuu kaloo Xildhibaanku sheegay, nidaamkaan inay ku shiri karaan, illaa 500 ruux, waxaana uu sheegay in ahmiyada koowaad la siinaayo sharciyada muhiimka ah ee Baarlamaanka horyaalo sida Sharciga doorashooyinka iyo kan axsaabta.
Ma cadda illaa iyo iminka nooca doorasho ee dalka ka dhaceyso sanadka 2021, iyadoo mudada xil haynta dowladda hadda joogta ay ka harsan tahay kaliya sideed bilood.
Cudurka dilaaga ah ee Coronavirus, saameynta xooggan ee uu ku yeeshay caalamka oo dhan, ayaa laga yaabaa in doorashada Soomaaliya dib u dhac ku keento, walow Xisbiyada Mucaaradka ahi ay si adag uga soo horjeedaan dib u dhac ku yimaado doorashada Soomaaliya ee lagu wado 2021.